Taliyaha Ciidanka Booliiska Puntland oo shaqada laga joojiyay, lagana dhigay xabsi guri - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyaha Ciidanka Booliiska Puntland oo shaqada laga joojiyay, lagana dhigay xabsi guri
October 23, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Taliyihii Ciidanka Booliiska Puntland Cabdiqaadir Faarax Ereg.
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyihii Ciidanka Booliiska Puntland ayaa shaqada waxaa ka joojiyay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada.
Cabdiqaadir Faarax Ereg ayaa sidoo kale waxaa laga dhigay xabsi guri, sida lagu sheegay bayaanka.
Tilaabada ayaa imaanaysa maalin kadib markii Taliyaha Ciidanka Booliiska Puntland uu rasaas ku furay guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faroweyne, balse waa uu ka badbaaday, waxaana ku dhaawacmay taliye ku xigeenka booliiska.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magacaabay golihiisa cusub ee wasiiradda maanta oo Axad ah, afhayeenka madaxtooyada Cubdallaahi Maxamed Quraanjacel ayaa iclaamiyay. Intooda badan golaha wasiiradda ayaa dib u soo noqday, iyaga oo wasiiro [...]